नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : जालझेल र तिग्डमका महानायक प्रचन्डले फेरी यसरी पासा हान्दैछन, काङ्रेस एमाले लाई पनि नेटो कटाउन चाहन्छन उनी, तर काङ्रेस एमाले प्रचण्डको खेल बुझ्दैनन !
जालझेल र तिग्डमका महानायक प्रचन्डले फेरी यसरी पासा हान्दैछन, काङ्रेस एमाले लाई पनि नेटो कटाउन चाहन्छन उनी, तर काङ्रेस एमाले प्रचण्डको खेल बुझ्दैनन !
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतीय सरकारको प्रधानमन्त्रीका लागि सम्भावित चार जनाको नाम अघि सार्नुभएको छ । प्रचण्डका नजरमा अबका सम्भावित प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार र महन्थ ठाकुर हुन् ।
कांग्रेसका हकमा भने प्रचण्डले शर्तसमेत अघि सार्नुभएको छ । आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा सोमबार साँझ सीमित सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पहिलो बिकल्पमा बाबुराम भट्टराईकै नाम अघि सार्नुभयो । ‘पहिलो बिकल्प बाबुरामजीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिका सरकार बनाउने हो, त्यसो हुन नसके माओवादीभित्रैबाट बन्ने अवस्थामा प्रकाश (नारायणकाजी) जीको नेतृत्वमा जान सकिन्छ ।’ प्रचण्डले भन्नुभयो-’गठवन्धनभित्रबाट जानु पर्ने भएमा मोर्चाका संयोजकसमेत रहनुभएकाले बिजयकुमार
गच्छदारजीको नाम आउन सक्छ । उहाँको विकल्पमा महन्थ ठाकुरजी पनि हुन सक्नुहुन्छ ।’
राष्ट्रपतिको वक्तव्य अनपेक्षित, तर मुठभेडमा नजाने
राष्ट्रपतिले वक्तब्य निकाल्नुअघि आफूसित टेलिफोनमा कुराकानी भएको जानकारी दिँदै प्रचण्डले आफुसँगको समझदारीभन्दा भिन्नै तरिकाले अनपेक्षित रुपमा वक्तब्य आएको बताउनुभयो । ‘लिखित आउँछ भनिए पनि अलि राजनीतिक किसिमको आउला भन्ने थियो, संविधानको धारा नै तोकेर आयो । यो संबिधानको मर्म र भावना बिपरीत भयो ।’-उहाँले सञ्चारकर्मीहरुसित भन्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले पत्र पठाएपछि सरकारले जवाफ फर्काउनु स्वभाविक हो भन्दै प्रचण्डले अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवीच द्वन्द्व बढाउन नहुने बताउनुभयो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसित थप मुढभेडमा जानुभन्दा सहमतिबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । यसबारेमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको समेत उहाँको दावी छ । नायँ प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकियो भने मंसिर १४ पछि के हुन्छ ? भन्ने संचारकर्मीको जिज्ञासामा प्रचण्डले हाँस्दै भन्नुभयो- ‘२१ गते आउँछ ।’